Tobban Sharci oo La Yaab Leh Laguna Tilmaamay Iney Yihiin Fashion Ragga ah.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Tobban Sharci oo La Yaab Leh Laguna Tilmaamay Iney Yihiin Fashion Ragga ah..
Published: October 4, 2016, 1:55 pm
(0) Comments 10 Sharci oo Fashion Ragga ah
Sideedaba fikrada Fashion waa xirasho wax ku le’eg, kugu haboon aadna nafis iyo istareex ku dareemayso. Iyadoo sidaa tahay ayaa hadana jiraan Sharciyo ay tahay in la raaco marki qofka rabo inuu xaragoodo ama si fiican u labisto. Hoos waxaan ku soo qaadaneynaa qeybti koowaad:
1. Midabka Suunka iyo Kabaha waa in ay isku midab ahaadaan
2. Mobile-ka ama Toorey “Mindi” ha suran Suunka haddii kale waxaad u akaaneysaa qof ugaarsi u socda
3. Boorso buuran oo lacag ama waraaqo aad ka buuxisay, Jeebka gadaalana aad gelisay kaa dhigi meyso Taajir. Waagi dadka lagu qaldi jiray lama joogo, Hada Mobiladi ayaa lacagta lagu qaataa ama credit card
4. Ha xiran Sharabaadyo (Sigisyo) Pink ah haddii kale dhinaca kale ayaad shabahaysaa
5. Xiro Dhar ku haboon qaab-dhismeedka jirkaaga. Aan ciriiri kugu ahayn ama kugu dhaganeyn
6. Kabo Sandal ah ha ku xiran Sigisyo (Sharabaadyo). hadaa rabto inaad cagahaaga daboosho, xiro kabo Buud ah
7. Surweel Jeans ah marnaba ha ku xiran Jacket Jeans ah. Xilligi isku jooga lagu iidi jiray ma aha
8. Dhar Jeex-jeexan oo sidaa lagu soo sameeyay marnaba magaalo ha u xiran adigoo is leh waa fashion. Sagaashameeyadi ayay ahayd mar kuwo sidaa sameyn jireen
9. Haddii aad Suit qaadaneyso, Dooro mid ku le’eg oo laguugu cabiray. Hadaa xirato Suit iyo Surweel kaa weyn ama holof ah, waxaad u ekaanaysaa inaad ka mid tahay Mafia
10. Kabo Madow iyo Sigisyo Cadaan ah waa Maya-Maya, ha isku xiran haddii aadan ahayn Heesaa hore Michael Jackson
« Warbixinta Ka HoreysayWax Badan Ka Barro Infakshanka Dhiiga Iyo Waxyaabaha Uu soo Dedejiyo…	Warbixinta Xigto »Saaxiibo noocee ah ayaad leedahay? Qormo Cajiib Ah Oo aan Ku Baraneyno Saaxiibada..	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Comments are closed.